महिला सहयात्रा लघुवित्त : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, ९ असोज २०७६)
महिला सहयात्राले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा रू. २ करोड ७४ लाख ४३ हजार नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा खराब कर्जा संकलन बढेकाले नाफा बढ्न सहयोग मिलेको हो । गत आवमा कम्पनीले रू. १ करोड १ लाख खराब कर्जा संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा यो रकम रू.७२ लाख ६८ हजार मात्र थियो । कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १२ करोड १० लाख रहेको छ ।
गत आव कम्पनीले अघिल्लो आवको नाफाबाट शेयरनीलाई ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । गत आवसम्ममा कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू. ४ करोड ५७ लाखभन्दा बढी रहेको छ । गत असार मसान्तसम्म यस कम्पनीले १७ जिल्लामा २७ ओटा शाखा कार्यालय स्थापना गरी २७ हजार ८३ जना ग्राहकहरूलाई लघुवित्त सेवा दिँदै आएको छ । कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ५५ प्रतिशत र प्रतिशेयर आम्दानी रू. २२ दशमलव ६८ छ । बुधवार कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रही रू. ४६० कायम भएको छ ।